Tee kunye nee Singlets
IiHoodies kunye neeSweatshirts
Ijimu kunye neyoga
Uyiqala njani iNtsebenziswano kwiShishini
Ukusuka kwimbono ukuya kwisiphumo sokugqibela
Xa kufunyenwe umbuzo wabathengi, iqela lethu lokuthengisa liya kuqhagamshelana nabo ngaphakathi kweyure eli-1 ukuqinisekisa zonke iinkcukacha kwaye banike iingcebiso ezifanelekileyo
Uyilo noPhuhliso lweMveliso
Iqela lethu loyilo lenza izinto ezihlekisayo njengezicelo zakho kwaye zikuthumele umsebenzi wobugcisa wokugqibela wokuvunywa kwakho. Uyilo oluthi emva kokuba luvunyiwe lwathunyelwa kwimveliso.
Isampuli yangaphambi kweMveliso
Ukwamkelwa kwesampulu yangaphambi kwemveliso ngokobungqina kunye neenkcukacha zeshiti lobugcisa elivunyiweyo, elinelaphu kunye nemibala, kunye neLAB DIP yombala ukuze yamkelwe
Ukuveliswa kweMisa kunye noLawulo loMgangatho oBini
Xa imveliso yobuninzi iqala, iqela lethu lokujonga umgangatho lisuphavayiza ngokuthe ngqo yonke inkqubo yemveliso yokugcina iimveliso ezigqityiweyo zichanekile ezifanayo nesampulu yangaphambi kwemveliso evunyiweyo.
Njengomvelisi oneminyaka engama-20 onamava, sinento egqityiweyo yokuthenga, ukusuka kwinto eluhlaza ukuya kwizinto ezahlukeneyo, njengomsonto, ukushicilela, ukuhombisa, ileyibheli, i-hangtag, njl njl. yengubo okanye yengubo eza kwenziwa.
Amandla, ulwenziwo kunye nemveliso
Nokuba yeyiphi ingubo ekufuneka iphuhlisiwe okanye unqwenela ulwenziwo. Sineqela kunye namava ayimfuneko ekuphumezeni zonke iintlobo zeeprojekthi. Sinemigca emi-3 ephambili yemveliso yehempe, ihempe yepolo, hoody kunye nebhatyi Malunga neziqwenga ezingama-300,000 zenyanga.
Sigcina ukuzibophelela rhoqo kumgangatho ngokutshekishwa kabini kwezambatho ngaphambi kokuziswa kumthengi.
Iindaba kunye nezehlo
Ithetha ntoni i-OEM / ODM kwisinxibo ma ...
Iimveliso ezifudumeleyo zasebusika eLotte Garm ...
Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo zoboya begusha
Jiangxi Lotte Iimpahla Co., Ltd.
Umzi mveliso weJiangxi LOTTE wasembatho wasekwa ngo-1997, wawuse Nanchang, Jiangxi, elikomkhulu lempahla yase China. LOTTE Ingubo ngumenzi wengubo oqeqeshiweyo onikezela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM, ukusuka kwintengo yokuthenga, ilaphu elinithiweyo, ukusika, ukuthunga kwiimveliso ezigqityiweyo, kunye nokunikezelwa kwempahla, ukwenziwa kwengubo kunye nenkonzo yemephu.
Umzi mveliso onemigca emine ephambili yokuvelisa, eyokuqala yiT-Shirt / ijezi yebhola ekhatywayo / itanki ephezulu, eyesibini yeyepolo, eyesithathu yeyebhatyi / yejeatshi / yoboya / ibhulukhwe, enye yeyokulala / iipijama. Phantse zonke iimpahla ezinithiweyo zinokwenziwa.
No 6 Qianhu zone mveliso, Luojia dolophu, Qingshanhu yesithili, Nanchang isixeko, Jiangxi kwiphondo, China.